မော်လ်ဒိုက် International Challenge ပြိုင်ပွဲမှာ ပရိသတ်တွေ ကို အံ့အားသင့်အောင် စွမ်းဆောင်ပြခဲ့ကြတဲ့ အိုင်းရစ်ဝမ် နဲ့ သက်ထားသူဇာ - SPORTS MYANMAR
မော်လ်ဒိုက် International Challenge ပြိုင်ပွဲမှာ ပရိသတ်တွေ ကို အံ့အားသင့်အောင် စွမ်းဆောင်ပြခဲ့ကြတဲ့ အိုင်းရစ်ဝမ် နဲ့ သက်ထားသူဇာ
လက်ရှိ ကျင်းပနေတဲ့ မော်လ်ဒိုက် International Challenge ပြိုင်ပွဲ ရဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ဦးချင်း ကဏ္ဍ ပွဲစဉ်ဟာ ဒီညနေမှာ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုလ်လုပွဲမှာတော့ အမေရိကန် နိုင်ငံသူ အိုင်းရစ်ဝမ် (ကမ္ဘာ့အဆင့် 102) ဟာ ၊ ဗီယက်နမ်သူ သီထရန်ဗူ (ကမ္ဘာ့အဆင့် 64) ကို 21-14 ၊ 21-15 ရလာဒ်တွေ နဲ့ ပွဲပြတ် အနိုင်ကစားပြီး ချန်ပီယံဆု ကို သိမ်းပိုက် သွားခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံကနေ သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ သက်ထားသူဇာ ကတော့ တတိယ ဆု ဆွတ်ခူး ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။
အိုင်းရစ်ဝမ် ဟာ ဘာဖြစ်လို့ ဗိုလ်စွဲသွားနိုင်ခဲ့တာလဲ?
ကြက်တောင် ပြိုင်ပွဲတွေဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ အချိန်ပြည့် ကျင်းပလျှက် ရှိနေတာ ဖြစ်ပြီး ၊ သူ့ရဲ့ ဆုကြေး ချီးမြှင့်နိုင်မှု အပေါ်မူတည်ကာ ပြိုင်ပွဲရဲ့ အဆင့်အတန်းကို ကမ္ဘာ့ကြက်တောင် အဖွဲ့ချုပ်က ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို သတ်မှတ်ရာမှာတော့ အဆင့်3ဆင့် အထိ ရှိနေပြီး ၊ အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း တွေ့ရမှာပါ။
• အိုလံပစ် ပြိုင်ပွဲ
• World Junior Championship
• Thomas Cup
• Uber Cup
• BWF World Tour Final
• BWF World Tour Super 1000
• BWF World Tour Super 750
• BWF World Tour Supper 500
• BWF World Tour Super 300
• BWF World Tour Super 100
• International Series
• Future Series
အခု ကျင်းပသွားခဲ့တဲ့ မော်လ်ဒိုက် ပြိုင်ပွဲဟာ Grade3အဆင့် ပြိုင်ပွဲတွေ ထဲမှာတော့ အမြင့်ဆုံး ပြိုင်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ Maldives International Challenge 2019 လို့ အမည်ပေးထားတာ ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း ချီးမြှင့်တဲ့ ဆုကြေး ပမာဏက ဒေါ်လာ 25000 ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ International Challenge ပြိုင်ပွဲတွေမှာ အနိမ့်ဆုံး ချီးမြှင့်ရတဲ့ ပမာဏမျိုးဖြစ်ပြီး ၊ International Series ပြိုင်ပွဲဆိုရင် အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ 10000 နဲ့ Future Series ဆိုရင် ဆုငွေ ကမ္ဘာ့အဆင့် သတ်မှတ်ချက် မြင့်ချင်တဲ့ သူတွေသာ ယှဉ်ပြိုင်ကြလေ့ရှိတာပါ။
ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်စွဲသွားခဲ့တဲ့ အိုင်းရစ်ဝမ်ဟာ သာမာ အားဖြင့် ကြည့်ရင်တော့ သူမ ရဲ့ အဆင့် သတ်မှတ်ချက်က ကမ္ဘာ့အဆင့် 102 မှာသာ ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် သူမ 2019 ခုနှစ် အတွင်း ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲ အများစုက BWF World Tour ပြိုင်ပွဲမျိုးတွေ ဖြစ်ပြီး ၊ Grade2အဆင့်က ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ယုံယုံကြည်မှု ရှိရှိ နဲ့ ၀င်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ အကျိုးရလာဒ်တွေဟာ မော်လ်ဒိုက် International Challenge 2019 ပြိုင်ပွဲမှာတော့ ဗိုလ်စွဲဖို့ ရေပန်းစားနေတဲ့ နာမည်ကြီး ပြိုင်ဘက်3ယောက်ကို ဆက်တိုက် နောက်ကောက်ချကာ ချန်ပီယံဆုကို ဆွတ်ခူးသွားစေခဲ့တာပါ။
သူမ BWF ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ထိပ်တန်း အဆင့် ပြိုင်ဘက်တွေ နဲ့ ရင်ဆိုင် ကစားရင်း ၊ အဲဒီ အတွေ့အကြုံတွေက ဒီပြိုင်ပွဲမှာ အံ့အားသင့်စရာ ရလာဒ်တွေ ထွက်ပေါ်လာဖို့ အထောက်အကူတွေ အများကြီး ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
ကွာတားဖိုင်နယ် အဆင့်မှာ ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ အစ္စရေး ကြက်တောင် ကစားသမား ပိုလီကာပိုဗာ ဟာ ဒီပြိုင်ပွဲမှာ နိုင်ချေ အဆင့်4အဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသလို ၊ အကြိုဗိုလ်လုပွဲမှာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ ရီဂစ် ကလဲ နိုင်ချေ အဆင့် 1 သတ်မှတ်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ဗိုလ်လုပွဲမှာ နောက်ကောက်ချပြခဲ့တဲ့ သီထရန်ဗူ ကတော့ နိုင်ငံချေ အဆင့်3သတ်မှတ်ခံရသူ ဖြစ်နေသည့်တိုင်အောင် ၊ သူမဟာ ပရိသတ်တွေ အားလုံးကို အံ့အားသင့်စရာတွေ အပြည့်ဖြစ်အောင် စွမ်းဆောင်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာ နောက်ထပ် တစ်ဆင့်ကို တက်လှမ်းဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ သက်ထားသူဇာ အတွက် Reference ယူရမယ့် ချန်ပီယံ ကစားသမား တစ်ယောက်ရဲ့ အောင်မြင်မှု မှတ်တမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ အိုင်းရစ်ဝမ် ဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့် 102 ဖြစ်နေတာကို ခေါင်းထဲ ထည့်မထားပဲ ၊ အတွေ့အကြုံ နဲ့ ရင်ဆိုင်ရဲ့တဲ့ သတ္တိတွေကို ပေါင်းစပ်ပြီး ၊ ကြုံတွေ့လာခဲ့တဲ့ အခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင် ဖြတ်ကျော် ပြသွားခဲ့တာပါ။
သက်ထားသူဇာ အတွက်လဲ ဒီပြိုင်ပွဲကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ပရိသတ် အများစုကရော ၊ မြန်မာ ပြည်က ပရိသတ်တွေကပါ ချီးကျူးစရာတွေ အများကြီး ရှိခဲ့ပါတယ်။
2019 ခုနှစ် အတွင်း သူမဟာ ပြိုင်ပွဲတော်တော်များများ မှာ ချန်ပီယံ ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် အဲဒီ ပွဲစဉ်တွေဟာ International Series တွေ ဖြစ်တာကြောင့် ၊ ဒီထက် မြင့်တဲ့ International Challenge ပြိုင်ပွဲမျိုးမှာ အောင်မြင်မှု ရယူပြဖို့ ၊ သူမ ရဲ့ ပရိသတ်တွေက မျှော်လင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ မော်လ်ဒိုက် က ပြိုင်ပွဲ မတိုင်ခင် အထိ ၊ သူမဟာ International Challenge ပြိုင်ပွဲ ဆိုရင် ရှုံးထွက် အဆင့်ကထက် မပိုပဲ ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။
သို့သော် ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ သူမ ဟာ စိန်ခေါ်မှုတွေကို သတ္တိရှိရှိ နဲ့ ရင်ဆိုင် ပြသွားခဲ့ပြီး ၊ နိုင်ချေ အဆင့်2သတ်မှတ်ခံထားရတေဲ့ ကနေဒါ နိုင်ငံသူ ဘရစ်နီ တမ် နဲ့ နိုင်ချေ အဆင့်5သတ်မှတ် ခံထားရတဲ့ ဇက်ချီရီ တို့ကို အံ့အားသင့်စရာ လက်စွမ်းတွေ နဲ့ ကျော်ဖြတ်ကာ အကြိုဗိုလ်လုပွဲအထိ တက်ရောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ သူမရဲ့ စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အရရော ၊ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အရပါ တိုးတက်လာတဲ့ ၊ သိသာ ထင်ရှားတဲ့ အချက်မျိုးဖြစ်ပြီး ၊ နောက်ထပ် ကြီးမားတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ယုံကြည်မှုတွေ ရသွားစေမှာလဲ သေချာပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ချန်ပီယံ ဖြစ်သွားတဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံသူ အိုင်းရစ် ၀မ် ရဲ့ ဖြတ်သန်းမှု ပုံစံတွေက ၊ သက်ထားသူဇာ အတွက် နောက်ထပ် ကြီးမားတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ ရယူဖို့ နမူနာကောင်း တစ်ခုလဲ ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ လက်စွမ်းဟာ International Challenge အဆင့်မှာတောင် ၀င်ရောက်လာပြီ ဖြစ်လို့ ၊ မကြာခင်မှာ BWF World Tour ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ၀င်ရောက်ဖို့လဲ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
မျောလျဒိုကျ International Challenge ပွိုငျပှဲမှာ ပရိသတျတှေ ကို အံ့အားသငျ့အောငျ စှမျးဆောငျပွခဲ့ကွတဲ့ အိုငျးရဈဝမျ နဲ့ သကျထားသူဇာ
လကျရှိ ကငျြးပနတေဲ့ မျောလျဒိုကျ International Challenge ပွိုငျပှဲ ရဲ့ အမြိုးသမီး တဈဦးခငျြး ကဏ်ဍ ပှဲစဉျဟာ ဒီညနမှော ပွီးဆုံးသှားခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ။
ဗိုလျလုပှဲမှာတော့ အမရေိကနျ နိုငျငံသူ အိုငျးရဈဝမျ (ကမ်ဘာ့အဆငျ့ 102) ဟာ ၊ ဗီယကျနမျသူ သီထရနျဗူ (ကမ်ဘာ့အဆငျ့ 64) ကို 21-14 ၊ 21-15 ရလာဒျတှေ နဲ့ ပှဲပွတျ အနိုငျကစားပွီး ခနျြပီယံဆု ကို သိမျးပိုကျ သှားခဲ့ပါတယျ။ မွနျမာ နိုငျငံကနေ သှားရောကျ ယှဉျပွိုငျတဲ့ သကျထားသူဇာ ကတော့ တတိယ ဆု ဆှတျခူး ရရှိသှားခဲ့ပါတယျ။
အိုငျးရဈဝမျ ဟာ ဘာဖွဈလို့ ဗိုလျစှဲသှားနိုငျခဲ့တာလဲ?
ကွကျတောငျ ပွိုငျပှဲတှဟော တဈကမ်ဘာလုံးမှာ အခြိနျပွညျ့ ကငျြးပလြှကျ ရှိနတော ဖွဈပွီး ၊ သူ့ရဲ့ ဆုကွေး ခြီးမွှငျ့နိုငျမှု အပျေါမူတညျကာ ပွိုငျပှဲရဲ့ အဆငျ့အတနျးကို ကမ်ဘာ့ကွကျတောငျ အဖှဲ့ခြုပျက ခှဲခွားသတျမှတျပေးထားတာ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီလို သတျမှတျရာမှာတော့ အဆငျ့3ဆငျ့ အထိ ရှိနပွေီး ၊ အောကျဖျောပွပါ အတိုငျး တှရေ့မှာပါ။
• အိုလံပဈ ပွိုငျပှဲ
အခု ကငျြးပသှားခဲ့တဲ့ မျောလျဒိုကျ ပွိုငျပှဲဟာ Grade3အဆငျ့ ပွိုငျပှဲတှေ ထဲမှာတော့ အမွငျ့ဆုံး ပွိုငျပှဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လဲ Maldives International Challenge 2019 လို့ အမညျပေးထားတာ ဖွဈပွီး စုစုပေါငျး ခြီးမွှငျ့တဲ့ ဆုကွေး ပမာဏက ဒျေါလာ 25000 ရှိပါတယျ။ ဒါဟာ International Challenge ပွိုငျပှဲတှမှော အနိမျ့ဆုံး ခြီးမွှငျ့ရတဲ့ ပမာဏမြိုးဖွဈပွီး ၊ International Series ပွိုငျပှဲဆိုရငျ အနညျးဆုံး ဒျေါလာ 10000 နဲ့ Future Series ဆိုရငျ ဆုငှေ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ သတျမှတျခကျြ မွငျ့ခငျြတဲ့ သူတှသော ယှဉျပွိုငျကွလရှေိ့တာပါ။
ဒီပွိုငျပှဲမှာ ဗိုလျစှဲသှားခဲ့တဲ့ အိုငျးရဈဝမျဟာ သာမာ အားဖွငျ့ ကွညျ့ရငျတော့ သူမ ရဲ့ အဆငျ့ သတျမှတျခကျြက ကမ်ဘာ့အဆငျ့ 102 မှာသာ ရှိနတော ဖွဈပါတယျ။ သို့သျော သူမ 2019 ခုနှဈ အတှငျး ယှဉျပွိုငျခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲ အမြားစုက BWF World Tour ပွိုငျပှဲမြိုးတှေ ဖွဈပွီး ၊ Grade2အဆငျ့က ပွိုငျပှဲတှမှော ယုံယုံကွညျမှု ရှိရှိ နဲ့ ၀ငျပွိုငျခဲ့တဲ့ အကြိုးရလာဒျတှဟော မျောလျဒိုကျ International Challenge 2019 ပွိုငျပှဲမှာတော့ ဗိုလျစှဲဖို့ ရပေနျးစားနတေဲ့ နာမညျကွီး ပွိုငျဘကျ3ယောကျကို ဆကျတိုကျ နောကျကောကျခကြာ ခနျြပီယံဆုကို ဆှတျခူးသှားစခေဲ့တာပါ။
သူမ BWF ပွိုငျပှဲတှမှော ထိပျတနျး အဆငျ့ ပွိုငျဘကျတှေ နဲ့ ရငျဆိုငျ ကစားရငျး ၊ အဲဒီ အတှအေ့ကွုံတှကေ ဒီပွိုငျပှဲမှာ အံ့အားသငျ့စရာ ရလာဒျတှေ ထှကျပျေါလာဖို့ အထောကျအကူတှေ အမြားကွီး ဖွဈစခေဲ့ပါတယျ။
ကှာတားဖိုငျနယျ အဆငျ့မှာ ရငျဆိုငျခဲ့တဲ့ အစ်စရေး ကွကျတောငျ ကစားသမား ပိုလီကာပိုဗာ ဟာ ဒီပွိုငျပှဲမှာ နိုငျခြေ အဆငျ့4အဖွဈ သတျမှတျခံခဲ့ရသလို ၊ အကွိုဗိုလျလုပှဲမှာ ရငျဆိုငျခဲ့ရတဲ့ ရီဂဈ ကလဲ နိုငျခြေ အဆငျ့ 1 သတျမှတျခံထားရတာဖွဈပါတယျ။ နောကျဆုံး ဗိုလျလုပှဲမှာ နောကျကောကျခပြွခဲ့တဲ့ သီထရနျဗူ ကတော့ နိုငျငံခြေ အဆငျ့3သတျမှတျခံရသူ ဖွဈနသေညျ့တိုငျအောငျ ၊ သူမဟာ ပရိသတျတှေ အားလုံးကို အံ့အားသငျ့စရာတှေ အပွညျ့ဖွဈအောငျ စှမျးဆောငျပွသှားခဲ့ပါတယျ။
ဒါဟာ နောကျထပျ တဈဆငျ့ကို တကျလှမျးဖို့ ကွိုးစားနတေဲ့ သကျထားသူဇာ အတှကျ Reference ယူရမယျ့ ခနျြပီယံ ကစားသမား တဈယောကျရဲ့ အောငျမွငျမှု မှတျတမျး ဖွဈပါတယျ။ အိုငျးရဈဝမျ ဟာ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ 102 ဖွဈနတောကို ခေါငျးထဲ ထညျ့မထားပဲ ၊ အတှအေ့ကွုံ နဲ့ ရငျဆိုငျရဲ့တဲ့ သတ်တိတှကေို ပေါငျးစပျပွီး ၊ ကွုံတှလေ့ာခဲ့တဲ့ အခကျအခဲတှကေို ရငျဆိုငျ ဖွတျကြျော ပွသှားခဲ့တာပါ။
သကျထားသူဇာ အတှကျလဲ ဒီပွိုငျပှဲကို စောငျ့ကွညျ့နတေဲ့ ပရိသတျ အမြားစုကရော ၊ မွနျမာ ပွညျက ပရိသတျတှကေပါ ခြီးကြူးစရာတှေ အမြားကွီး ရှိခဲ့ပါတယျ။
2019 ခုနှဈ အတှငျး သူမဟာ ပွိုငျပှဲတျောတျောမြားမြား မှာ ခနျြပီယံ ဖွဈခဲ့ပမေယျ့ အဲဒီ ပှဲစဉျတှဟော International Series တှေ ဖွဈတာကွောငျ့ ၊ ဒီထကျ မွငျ့တဲ့ International Challenge ပွိုငျပှဲမြိုးမှာ အောငျမွငျမှု ရယူပွဖို့ ၊ သူမ ရဲ့ ပရိသတျတှကေ မြှျောလငျ့ခဲ့ကွပါတယျ။ မျောလျဒိုကျ က ပွိုငျပှဲ မတိုငျခငျ အထိ ၊ သူမဟာ International Challenge ပွိုငျပှဲ ဆိုရငျ ရှုံးထှကျ အဆငျ့ကထကျ မပိုပဲ ဖွဈနခေဲ့တာပါ။
သို့သျော ဒီတဈကွိမျမှာတော့ သူမ ဟာ စိနျချေါမှုတှကေို သတ်တိရှိရှိ နဲ့ ရငျဆိုငျ ပွသှားခဲ့ပွီး ၊ နိုငျခြေ အဆငျ့2သတျမှတျခံထားရတေဲ့ ကနဒေါ နိုငျငံသူ ဘရဈနီ တမျ နဲ့ နိုငျခြေ အဆငျ့5သတျမှတျ ခံထားရတဲ့ ဇကျခြီရီ တို့ကို အံ့အားသငျ့စရာ လကျစှမျးတှေ နဲ့ ကြျောဖွတျကာ အကွိုဗိုလျလုပှဲအထိ တကျရောကျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါဟာ သူမရဲ့ စိတျပိုငျး ဆိုငျရာ အရရော ၊ စှမျးဆောငျရညျပိုငျး ဆိုငျရာ အရပါ တိုးတကျလာတဲ့ ၊ သိသာ ထငျရှားတဲ့ အခကျြမြိုးဖွဈပွီး ၊ နောကျထပျ ကွီးမားတဲ့ စိနျချေါမှုတှကေို ရငျဆိုငျဖို့ ယုံကွညျမှုတှေ ရသှားစမှောလဲ သခြောပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ခနျြပီယံ ဖွဈသှားတဲ့ အမရေိကနျ နိုငျငံသူ အိုငျးရဈ ၀မျ ရဲ့ ဖွတျသနျးမှု ပုံစံတှကေ ၊ သကျထားသူဇာ အတှကျ နောကျထပျ ကွီးမားတဲ့ စိနျချေါမှုတှေ ရယူဖို့ နမူနာကောငျး တဈခုလဲ ဖွဈမယျ ထငျပါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ လကျစှမျးဟာ International Challenge အဆငျ့မှာတောငျ ၀ငျရောကျလာပွီ ဖွဈလို့ ၊ မကွာခငျမှာ BWF World Tour ပွိုငျပှဲတှမှော ၀ငျရောကျဖို့လဲ မြှျောလငျ့မိပါတယျ။